WWE Superstar yakagumbatira kumashure kumashure kubva kuna Vince McMahon uye Triple H mushure memutambo wake wezita (Exclusive) - Wwe
Sportskeeda Wrestling yakave nemukana wekutaura naJinder Mahal muLas Vegas pamusoro peSummerSlam kupera kwevhiki, uye iyo Yemazuva Zuva Maharaja yakavhura pamusoro pezvekuitika kumashure kumashure kune yake yenhoroondo WWE Championship kuhwina kubva 2017.
Jinder Mahal akakunda Randy Orton paBacklash kuti ahwine zita rake rekutanga muWWE, uye shasha iyi yaisakwanisa kukumbira mukwikwidzi wakakurumbira kuti utange kutsvaga kwake goridhe.
Iyo superw RAW yakayeuka ichitambira mahug mahombe kubva kuna Vince McMahon, Triple H - nemupikisi wake manheru iwayo - Randy Orton, mushure mekunge afamba nepakati pemaketeni aine zita rake reWWE.
maitiro ekuti nguva iende nekukurumidza
Makore mana apfuura nhasi, Jinder Mahal akatyora internet paakakunda Randy Orton kuita WWE CHAMPION, paBacklash 2017. pic.twitter.com/g0W13sQn3e
- NAZARIO #SHANKYSZN #KINGSUKESZN (@ mattnazar50) Chivabvu 21, 2021
Jinder Mahal akati aisakwanisa kurangarira zvese zvakaitika kuseri kwezviitiko zvichitevera kukunda kukuru kwebasa rake sezvo zvese zvaive 'chinhu chikuru' kwaari.
Iye aimbove shasha yepasirese ane mafoto ake achigovana hug naVince McMahon ndokuti mukuru weWWE aidada naye mushure mekuita kwake mumutambo wezita.
Heano Jinder Mahal achitaura nezve kumashure kwemashure mushure mekutora zita rake rekutanga repasi rose muWWE:
'Akandimbundira (kuseka). Kutendeseka, yaive yakaita hombe blur, asi ini ndine mifananidzo yacho. Ndozvandinoziva kuti zvakaitika. Akandimbundira zvikuru. Triple H yaitsigira kwazvo. Akandimbundira zvikuru. Randy! Yakanga isina kuita sekutaurirana kwenguva refu kana chero chinhu chakadai. Zvaingova, 'Ndinodada newe.' Une kumbundirana kukuru, uyezve yaive nguva yekubva ipapo, 'Jinder Mahal akazivisa.
Jinder Mahal anodada nekumiririra India muWWE
WWE Yemazuva Ano Maharaja Maharaja akasaina nemeseji kune vake vateveri veIndia.
Jinder Mahal akatenda munhu wese muIndia nekuramba vachitsigira uye akati yaive rombo rakanaka kumiririra nyika yake nevanhu vayo papuratifomu yewrestling yepasi rose.
zviratidzo mukomana wangu haachandidi
'Ndinokutendai kune wese munhu nerutsigiro rwese, nerudo rwose. Ndiri kuzvikudza uye ndakakomborerwa kukumiririrai mose. Saka, maita basa vakomana, uye ndinovimba ndinogona kuramba ndichiita kuti munhu wese azvikudze, 'akawedzera Jinder Mahal.
Gadzira nzira yeiyo #ModernDayMaharajah ! @JinderMahal hondo @DMcIntyreWWE ZVINO ZVINO Rarama pa #SummerSlam .
- WWE SummerSlam (@SummerSlam) Nyamavhuvhu 22, 2021
Jinder Mahal akaudzawo Sportskeeda Wrestling's Jose G. kuti angafarire kuona Horo yeNzara ichiita kudzoka kweWWE. Mahal akatotumira kukoka kune yaimbove nyeredzi, iyo iwe yaunogona kuverenga pano.
Kana paine chero makotesheni anoshandiswa kubva pachinyorwa chino, ndokumbirawo uwedzere H / T kuSportskeeda Wrestling.
alice mu Wonderland makotesheni ndapenga here
sei kumira kuita godo uye kutonga
zvinotora nguva yakareba sei kudonha
yekudzivirira uye yekudzivirira matekiniki ema empaths
vanhu vanotiza matambudziko avo
ndeipi tsananguro yehukama hwakazvipira